သတိရလုံးအချမ်းတုန်၊စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ညွင္းခဲ့ကြသောသူအရေသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအချိန်၏ဘုန်းအသရေ၏အခြေစိုက်စခန်း။ ကောင်းပြီ၊အခုတော့ကျွန်တော်အမျိုးအစားအသက်ပြန်နှင့်အတူအဆိုပါစာသားအခြေခံညမ်းဂိမ်းစုဆောင်းမှု! ဤအချိန်၌၊ကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူခြင်းနှစ်ခု၏အများဆုံးရှာသောအမျိုးဂိမ်း၏အားလုံး၏ကြိမ်၊သို့သူတို့ကိုငါပေါင်းစပ်တစ်ခုအကြီးအကျယ်နှင့်လှပသောအယူအဆ။ ကစားနှင့်တွေ့ရှအသစ်ကမ္ဘာနှင့်စေသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းအခမဲ့နှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းမှာအချို့ခံစားကြည့်ပါအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းများအတွက်ရရှိနိုင်။
ဤသည်ဘယ်တော့မှမမီကိုမြင်ပေါင်းစပ်စာသား၏အခြေခံပြီးဂိမ်းနှင့်ညစ်ညမ်း။ သင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုခုအသစ်ဖြစ်၏နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ခုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်။ အများအပြားစာသားအခြေခံအားကစားပြိုင်ပွဲရှိကြ၏စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများ(အစောပိုင်းရှိကြရဲ့)နှင့်အတူနဂါးပုဏ္ဏားနှင့်နိုက်။ ယခုငါတို့သင်ဆောင်အတူတူပုံပြင်မောင်းနှင်အတွေ့အကြုံ၊အတူတူ uncanny ခံစား၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးလှည့်ကွက်နှင့်အတူ! မကောင်းဆိုးဝါးများနှင့်နိုက်ယခုၡမ်ားဇာတ်ကောင်နှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များရှိသည်နှင့်သူတို့ကြောအဖြစ်စမ်း! စိတ်ကူးအဆိုပါတိုက်ပွဲအစားထိုးခံရနှင့်အတူလိင်ရွေ့၊penetrations၊ပည္ဆိုင္ရာထုတ်လုပ်သူ!, အားလုံးဂိမ်းများအတွက်စစ်မှန်သောဒီစုဆောင်းမှုများမှာဒီဇိုင်းအပြစ်ကင်းစင်ရောနှောအားလုံးသည်အရေးကြီးသောအသွင်အပြင်ကိုရောက်စေဖို့ကစားသမားအကြီးမြတ်ဆုံးအရည်အသွေးများ၏ပျော်ရွှင်မှု။ တန်ချိန်ရှိပါတယ်ဂိမ်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှလိုအပ်နှင့်လှပစွာခွဲခြားချောမွေ့ရန်အသီးအသီးစားသမားရှာဖွေအတွက်အမှန်ဂိမ်း။
သင်အမည်ရိုက်ထည့်တစ်နိုင်ငံ၏အထူးခြားသောအပျော်အဆုံးမဲ့နှင့်အတူစာသား-အခြေပြုအလှန်။ သင်အမျိုးအစားအတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့ချင်သောအစာ၊မဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကန့်သတ်အတိုင်း၊နှစ်ခု၊သုံးခုကျွမ်းကျင်မှုရရှိနိုင်သော။ ဤသည်အဘယ်အရာကိုဤစုဆောင်းခြင်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအခြားသူများထံမှကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သို့အမျိုးအစားဇာတ်ကောင်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊သငျသညျအမိန့်တစ်ဇာတ်ကောင်အားဝပ်တွား၊ယူနီပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်ပါးပဲရိုက်အကြော harpy အမကျြနှာကိုဖြတ်ပြီး၊ထိုသို့ပြုလိမ့်မည်ကိုအတိအကျကြောင်း! ဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမဲ့များမှာ၊သို့ရာတွင်အဆိုပါစာသား-အခြေပြုဂိမ်း၏အရှင်ဘုရားသခင်ကိုဂိမ်းများထွက်ရှိပါတယ်။, သင်လုပ်နိုင်အမိန့်အထိ၊သံဃာ့ေ၊ရိုက်ပုတ်ခြင်း၊နမ်းခြင်း၊ကန်၊ညှစ်၊ဖမ်းသို့မဟုတ်မျိုးကိုမဆိုအရေးယူသင်စဉ်းစားနိုင်သည်အရာအားဖြင့်ပဲအဆုံး။ ညှဉ်း၊ယခုဂိမ်းကိုလွှမ်းမိုးသို့သော်သင်မထိုက်မတန်မြင်သည်အထောင်ထဲတွင်သခင်အစစ်အမှန်သဘောကိုစကားလုံး။ ဤသည်လျှင်သင့်ရဲ့လိန်၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤအမြောက်အများမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများလိမ့်မည်သင်ရီနှင့်နာရီပေါင်းများစွာရှာဖွေစူးစမ်းယုံစိတ်ကူးယဉ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ကမှန်သည်၊ထိုအရပ်ကိုအကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထက်ညစ်ညမ်းစာသား! ဆည်းတစ်လျှောက်အရည်အသွေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ဦးကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်ပါပြီအသစ်နှင့်တိုးတက်လာသော။ ထူးချွန်ဂရပ်ဖစ်ကိုဖြည့်ကြောင်းယခင်အနှစ်။ သည့်အခါတစ်ဦးလိင်အရေးယူသို့မဟုတ်မည်သည့်မျိုး၏လှုပ်ရှားမှုအမှန်တကယ်၊ဖျော်ဖြေဖြစ်ပါတယ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်စေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်မီက။ ရှိပါတယ်မျှအခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရမည်၊အထက်ပိုကောင်းအမြင်အာရုံရှိရမည်။ ဒါကြောင့်၊အပြင်စိတ်လှုပ်ရှားသောဇာတ်လမ်းနှင့်ဂိမ်းအလိုလိုပူဇော်သက္ကာဘို့အသင်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်အတူထိပ်တန်းအရည်အသွေးလိင်မြင်ကွင်းများ၊ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူအောင်လက်တွေ့ကျအ shiver ပြီးညည်း။, အဆိုပါဂိမ်းများကိုရောက်စေဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ၊အဆိုပါကစားသမား၏အမြင့်ဆုံးအပျော်အပါးနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထူးခြားဆန်းပြားနှင့်ထူးခြားတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာ။ လိင်မြင်ကွင်းများအတွက်ဤအမျိုးအစားများဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်အမျိုးမျိုးသောကြောင့်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကစားသမားကိုယ်တော်တိုင်စားပွဲပေါ်မှာမှဆောင်ခဲ့တတ်၏နှင့်အတူသူ၏ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးသို့မဟုတ်ပညတ်။ လာအကြီးမြတ်ဆုံးအထောင်ထဲကမာစတာအစဉ်များလိင်ကမ္ဘာမှာအိပ္တည္း။ မြေတပြင်လုံးစုဆောင်းမှု၏ဂိမ်းအပြည့်အဝအ၊အဘယ်သူမျှမပို့လိုက်ကြတယ်၊ပေါ်လာပါတယ်ည့္ခ်ိန္အထည့်သွင်းနိုင်အောင်ဒီအသစ်ခံစားကြည့်ပါအတွေ့အကြုံမှာ၎င်း၏လေးရယ်!
စာသားအခြေခံညမ်းဂိမ်းစုဆောင်းမှုတစ်ဦးပလက်ဖောင်းဒီဇိုင်းအဘို့အကအလွန်တိကျတဲ့နယ်ပယ်များ၏အပျကွောငျးကစားသမားတွေအမှန်တကယ်သိအမြောက်နှင့်ဝယ်ယူ၏အရသာ။ အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲဂၤါအသင်တန်း၏အပြင်နှင့်စုံလင်သောအခြေအနေ၊အတူမရှိပါဆော့ဖ်ဝဲအားနည်းချက်များနှင့်အသက္အႏၱ၊အစဉ်အဆက်! ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့မှအသစ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဤအမျိုးဂိမ်း၏ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကဖန်ဆင်းအလွန်အသုံးပြုသူဖော်ရွေ၊ထည့်သွင်းလွယ်ကူသင်ခန်းစာများလည်းဒါမည်သူမဆိုကိုပျော်မွေ့နိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခရီးတစ်ထုံးစံအတွက်မိနစ်။ အဆိုပါဂိမ်းစုဆောင်းမှုအသုံးပြုခြင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်၊အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းစုံလင်စွာအားလုံးပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်တည်ရှိကြောင်း။, ဒါကြောင့်၊သင်အသုံးပြုနေတဲ့ဘုတ္မ်ား၊တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းကျနော်တို့ရရှိပါသည်။ ဤအမျိုးအစားညမ်းဂိမ်းများခွင့်ပြုကစားသမားဖြစ်ဖို့အမည်မသိနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမစစ်မှန်သောချိတ်ဆက်ဖို့အစစ်အမှန်အသက်တာ။ ရိုက်ထည့်ရန်ဂိမ်းအဖြစ်၊သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာမှမတပ်ဆင်ခြင်း၊သို့မဟုတ်အရှုပ်ထွေးများဆက်တိုက်လုပ်ရပ်တွေကိုကြိုတင်။ သင်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါကစားနှင့်ပြီးသားရှိပါတယ်အဆုံးညတ်။ အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းဖန်တီးတဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့စတင်သံုးေသို့သင့်ရဲ့လမ်းဒီအဆုံးမဲ့သမုဒ္ဒရာ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။
ထို့အပြင်၊အဘယ်သူမျှမဒေတာအများဝယ်ယူအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အဖြစ်လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်လိပ်များမှာအလွန်အရေးကြီးသည်ငါတို့အဘို့အ။ လုံခြုံမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကျွန်ုပ်တို့၏ကစားသမားကြွလာသောပထမဦးဆုံးအကြိမ်မှာအားလုံး။ တစ်ဦးလည်းရှိပါတယ်ဖိုရမ်နှင့်တစ်ဝန်းရှိနိုင်ချက်ချင်းချိတ်ဆက်ဖို့သင်၏ကျန်နှင့်အတူငါတို့သည်ငါတို့၏ကစားသမားနှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ကြောင်းအမြဲရှာဖွေနေမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါအကူအညီနှင့်အသီးအသီးအခြားနှင့်၊အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်၊မင်းအသီးအသီးအခြားဂိမ်းအတွက်ဒါမှမဟုတ်ပင်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ သင်ဆဲယုံကြည်တယ်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းပလက်ဖောင်း၊ဒီမှာထိုချယ်ရီအပေါ်။ မှတပါးအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများဖော်ပြခဲ့သည်၊ဒီလုံးဝအခမဲ့နှင့်န့်အသတ်။, ဘူးပင်ရှိေဖာင်ဖို့မလိုကြဘူးဆိုရင်၊ပဲတိုက်ရိုက်ထိကစားဆိုရာက္ဇာ၏ရွေးချယ်ခြင်း၊အပေါ်မည်သည့်ပလက်ဖောင်း။ သင်ကိုယ်တိုင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အပေါ်စတင်၊ဤတစ်တသက်တာမှာတခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထောင်ထဲကခရီးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမြင်ရ၏စွန့်စားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်ပြည့်စုံ!
ပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်အပေါ်အဆိုပါစာသားအခြေခံညမ်းဂိမ်းစုဆောင်းလိမ့်မည်ကျိန်းသေချိတ်ဆက်! မင်း၊၊ရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ကြမ်းတမ်းနှင့်ပည္ဆိုင္ရာ! မကြိုးစားရလည်းစွဲခက်ခဲတဲ့။ စတင်ခရီးနှင့်အောင်မြင်ထွတ်ဘယ်တော့မှမမီကကဲ့သို့!